Pabrika fametahana diamondra alimina aluminium
Big Zero Spangle ho an'ny rindrina ivelany dia milentika Galvaniz ...
Takelaka vita amin'ny takela-by aluminium
Takelaka aluminium 6061-T651
Takelaka diamondra alimina 3003
Takelaka aluminium 1050
Takelaka takelaka vita amin'ny takela-by vita amin'ny alim-baravarankely China Manuf ...
Takelaka firaka vita amin'ny alim-bidy mirary lafo
Takelaka aluminium lafo amidy 8011
Tapakila aluminium lafo amidy 3003
Fanoherana avo lenta avo indrindra 6061 T6 fanosorana aliminioma ...
Rust fanoherana tsara harafesina Aluminium takelaka takelaka M ...
Mpamatsy takelaka firaka vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina any Shina
Panelan'ny rindrina aluminium ao anaty trano
Mpanamboatra takelaka diamondra aluminium
3003-H22 Takelaka famakiana diamondra mamirapiratra
Aluminium Panels Exterior
Ny karazan'ireo takelaka rindrina vita amin'ny aliminioma dia samy hafa ary azo zaraina amin'ny takela-by amin'ny alim-baravarankely anatiny sy ireo takelaka aluminium ivelany. Ny takelaka metaly vita amin'ny metaly dia misy bika mahafinaritra, ary izy ireo koa dia afaka miaro ny afo, miaro ny tselatra, mitahiry hafanana, mitaingina feo, miditra rivotra, manaloka sns.
8000 andiana firaka aliminioma an'ny andiany hafa ary ny sokajy aliminioma mahazatra indrindra dia ny firaka 8011 vita amin'ny alimo. Ny fampiharana lehibe indrindra amin'ny firaka alimo 8011 dia karazana foil aluminium, saingy tsy dia ampiasaina amin'ny takelaka izany.
Takelaka diamondra aluminium
Ny lamina takelaka diamondra aliminioma dia manampy amin'ny fanalefahana ny mety hisosa amin'ny fanaovana azy io ho fampiasana tsara amin'ny sehatry ny indostria toy ny tohatra, arabe ary lalan-tongotra.
Ny coil aluminium dia vokatra vy izay iharan'ny fanetezana manidina aorian'ny fanodinana sy fanodikodinam-baravarankely amin'ny fikosoham-bary sy fikosoham-bary.
Ny coil aluminium dia be mpampiasa amin'ny elektronika, fonosana, fanamboarana, milina sns maro ny mpanamboatra coil aluminium ao amin'ny fireneko, ary ny fizotran'ny famokarana dia nahatratra ireo firenena mandroso. Ny coil aluminium dia misy singa vy samy hafa.
Extrusions amin'ny firaka aluminium
Araka ny fitsipiky ny fanasokajiana samy hafa dia misy karazana aluminiumalloys iraisana.
Voalohany, ny firaka vita amin'ny aliminioma mahazatra dia mizara ho amina andiana alimo alimo 8 arakaraka ny endrika simika samihafa;
Cladding Composite Aluminium
Ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny aliminioma ivelany dia karazana takelaka vita amin'ny alimo ho an'ny rindrina. Ao amin'ny fiarahamonina maoderina, ny teknolojia famokarana sy fanodinana plastika vita amin'ny aliminioma dia efa nandroso tokoa. Ny firafitra ivelany vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina dia mirakitra sehatra samihafa ihany koa ary ny firafitry ny aluminium dia ampahany lehibe amin'ny famokarana takelaka alimo amin'ny rindrina.
Ny velarana dia voasokitra miaraka amina lamina tokana, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fanodinana tsara, ny hamafin'ny avo, ny fanoherana ny harafesina, ary ny fitrandrahana oksidana tsara sy ny vokatra eo amin'ny fitsaboana etỳ an-tany. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazana tena tsara, lamina mazava ary endrika madio. Ampiasaina be izy io amin'ny famokarana fitaovana sy milina, firafitra ary sehatra izay mitaky tanjaka iray.
6061-T6 dia iray amin'ireo firaka vita amin'ny aliminioma 6000 andiany ampiasaina matetika. 6000 andiana takelaka vita amin'ny aliminioma omena dia misy andiany 6061 sy 6082. Ny tena manokana manokana, ny takelaka aliminioma 6061 dia vokatra misolo tena an'ity andiany ity.